တရုတျတှငျ ဘယျလိဂျ၊ဘယျကလပျနှငျ့ဘယျကစားသမားတို့က လူကွိုကျအမြားဆုံးလဲ? – Play Maker Sports Journal
တရုတျတှငျ ဘယျလိဂျ၊ဘယျကလပျနှငျ့ဘယျကစားသမားတို့က လူကွိုကျအမြားဆုံးလဲ?
ဒါပမေယျ့လညျးပရီးမီးယားလိဂျဟာတရုတျတှငျလူကွိုကျအမြားဆုံးလိဂျအဖွဈရပျတညျနဆေဲဖွဈကွောငျး South China Morning Post က ဖျောပွလာပါတယျ။
ဒါပမေယျ့တရုတျမှာလူကွိုကျအမြားဆုံးကစားသမားအဖွဈပရီးမီးယားလိဂျကစားသမားရပျတညျနခွေငျးမရှိပါဘူး။ ထုံးစံအတိုငျးခရစ်စတီယာနိုရျောနယျဒိုကဘဲလူကွိုကျအမြားဆုံးကစားသမားအဖွဈရပျတညျနပေါတယျ။ရျောနယျဒိုဟာအငျစတာဂရမျမှာလညျး Follower အမြားဆုံးအဖွဈရပျတညျနသေူပါ။အသကျ၃၅နှဈရှိကစားသမားဟာWeibo မှာလညျးနမောထကျ Follower ငါးဆအထိမွငျ့မားပါတယျ။
စိတျဝငျစားဖို့ကောငျးတာကတော့တရုတျမှာလူကွိုကျအမြားဆုံးကစားသမားအဖွဈ မနျယူနှငျ့ရီရဲလျမကျဒရဈစူပါစ တားဟောငျးဒေးဗဈဘကျဟမျးကရပျတညျနတောဖွဈပါတယျ။ဘကျဟမျးဟာကစားသမားဘဝမှအနားယူထားတာ ကွာမွငျ့ပွီဖွဈပမေယျ့တရုတျမှာယခုတိုငျလူကွိုကျမြားတုနျးပါ။
တရုတ်တွင် ဘယ်လိဂ်၊ဘယ်ကလပ်နှင့်ဘယ်ကစားသမားတို့က လူကြိုက်အများဆုံးလဲ?
ဒါပေမယ့်လည်းပရီးမီးယားလိဂ်ဟာတရုတ်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးလိဂ်အဖြစ်ရပ်တည်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း South China Morning Post က ဖော်ပြလာပါတယ်။
ဒါပေမယ့်တရုတ်မှာလူကြိုက်အများဆုံးကစားသမားအဖြစ်ပရီးမီးယားလိဂ်ကစားသမားရပ်တည်နေခြင်းမရှိပါဘူး။ ထုံးစံအတိုင်းခရစ္စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုကဘဲလူကြိုက်အများဆုံးကစားသမားအဖြစ်ရပ်တည်နေပါတယ်။ရော်နယ်ဒိုဟာအင်စတာဂရမ်မှာလည်း Follower အများဆုံးအဖြစ်ရပ်တည်နေသူပါ။အသက်၃၅နှစ်ရှိကစားသမားဟာWeibo မှာလည်းနေမာထက် Follower ငါးဆအထိမြင့်မားပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကတော့တရုတ်မှာလူကြိုက်အများဆုံးကစားသမားအဖြစ် မန်ယူနှင့်ရီရဲလ်မက်ဒရစ်စူပါစ တားဟောင်းဒေးဗစ်ဘက်ဟမ်းကရပ်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘက်ဟမ်းဟာကစားသမားဘဝမှအနားယူထားတာ ကြာမြင့်ပြီဖြစ်ပေမယ့်တရုတ်မှာယခုတိုင်လူကြိုက်များတုန်းပါ။
ကွှေးမွီယူရို၉၀၁သနျးအထိ တငျနပွေီဖွဈတဲ့ ရီးရဲလျမကျဒရဈ
ပယျလဈစထရီကို အငှားခရြနျ အလာဗကျဈနှငျ့ မနျယူတို့ ဆှေးနှေးနေ